Ndeupi mufananidzo wauchasarudza kubva kumagumo eiyi artical
Ndeupi mufananidzo wauchasarudza kubva kumagumo eiyi artical
Creativity 5 Comments Oct-27-2020
Wow, varume!itsva mold kutumira nguva !!Haa, Ona kuti musikana wedu wekutengesa anofara sei!
Zvakanaka, ndisati ndatumira mufananidzo uyu, dambudziko rakanetseka mumoyo mangu.Shamwari ine huwandu hukuru hwe "linkedIn" yekubatanidza yaigara ichindipa zano remutsa: Hei, harry!hazvina kunaka kukoka musikana kuti amire ne molds, kunyanya nechiso chikuru chinonyemwerera!Huya, kugadzira mold kunofanirwa kuve kwakakomba kesi, ok?Dai aive nemukomana wehunyanzvi akabata caliper kana bepa rekudhirowa kutsiva angave akakodzera zvakanyanya?
Nenguva iyoyo, sekutaura kwaakaita, ndinonzwa tsitsi kuita kuti timu yedu iome, sezvo zvandakaita zvakaratidza kusanzwisisika kuvaverengi vanodiwa.Zvinoita sekubata vateereri maziso ndicho chete chinangwa chekutumira kwangu!Nokudaro, panguva ino ndakanga ndafunga kuita sezvaakataura, kuva akarongeka somugadziri “chaiye”!Ipapo, ndakatora mufananidzo wekutanga nerubatsiro rwevandinoshanda navo zvakanyanya.senge pazasi mufananidzo wakaratidzwa, mold chete uye zvigadzirwa zvinoratidzwa pamberi pe lens yangu, zviri pamutemo uye zvakachena, zvese zvakanaka.asi ndinonzwa chimwe chinhu chakarasika ...
Pandakapedza kutora maphotos, ndokuronga kufamba kudzokera.Musikana wedu "mushure memakore makumi mapfumbamwe" akati: ndingawanewo foto ine mold iyi?Ndikati, hongu!Anobva atanga kugadzira marudzi ese e "nyanzvi" anomira ne mold, sekuita selfie wega, uye vamwe vashandi mumusangano vese vakavharwa kuseri kwekamera nekuseka, kamwe kamwe mhepo yewekishopu inodziya uye inowirirana.Nhengo dzechikwata chedu dziri kufara nekuita kwavo, uye pfungwa yekubudirira yairatidza pazviso zvavo zvainyemwerera…
Zvakanaka, kugadzira maturusi kunofanirwa kunge kuri nyaya yakakomba uye nemazvo, asi kuita basa nemoyo wekufara kunogonawo kukosha kune vashandi vedu.Sezvaunoziva, kana nguva yepurojekiti yakamanikana, vashandi vedu vanowanzo shanda nguva yakawandisa, kunyangwe husiku hwese kuchengetedza inotungamira-nguva, chengeta chivimbiso kune vatengi vedu.Vakaneta uye vaneta mukati megadziriro, kana zvichibvira kuratidza ruremekedzo rwedu nokuonga basa ravo nechigadzirwa, nei?Pavanenge vachipenya ne“hunyanzvi” hwavo, hatifaniri here kuvaita kuti vanzwe kuombera kwedu?Tooling inotonhora, asi kudziya kubva kuchikwata!
Iye zvino zuva, vazhinji varidzi vekambani yezvishandiso vanogunun'una: Zviri kuramba zvichinyanya kuoma kutora vashandi, zvisinei nevagadziri, mainjiniya kana mashandiro emuchina.kunyanya kuboka re "mushure memakore makumi mapfumbamwe", semupfungwa dzavo, hapana kunakidzwa kwakanyanya muindasitiri yekugadzira mold.Chizvarwa chitsva chine tsananguro yavo nezvekushanda, mufaro unowedzera uye unonyanya kukosha chinhu kuvaka nekusimbisa timu.
Saka mudiwa muverengi, unofunga kuisa chiitiko chinofadza mubasa redu remazuva ese, kuzorodza timu kana maitiro asina kumira zvakanaka kana kuti kwete?ndapota ratidza mafungiro ako nekusarudza mufananidzo kubva pazasi maviri.
Nguva yekutumira: Oct-27-2020
Vangani vaunoziva nezve part molding defect -marks
Mhinduro dzekudzora deformation yemhepo & mvura tank-modification chikamu
Haufungi here kuti musikana wedu mudiki akanyanya kunaka pakushandisa maturusi-shopu
Mhoro shamwari, Wona Maitiro ekuAmerica anotonga yako molds level!
Maitiro ekudzora deformation yemhepo & mvura tangi chikamu? -dhizaini chikamu
Transparent food-box molds dzakatumirwa kune mutengi
Chii chinonzi science tooling trial?
Ndeapi maitiro akajairika ekugadzira epurasitiki? Zvakanakira uye zvakaipira zvitambi zvinofa Musiyano pakati pepurasitiki mold uye jekiseni mold Chii chakakosha kugadzira mold? Mhando uye zvakanakira uye kuipa kwejekiseni mold magedhi Ndedzipi nyaya dzemagadzirirwo dzinofanirwa kutariswa mukugadzirwa kwepurasitiki molds? Sei zvigadzirwa zvekuumba majekiseni zvine nzvimbo yekudzikisa, uye kukura kwayo kunoenderana nei? Intelligent mold inzira isingadzivisiki yekusimudzira indasitiri Chii chandinofanira kutarisisa kana ndichishanda epurasitiki jekiseni molding? 5 matanho ekugadzira epurasitiki mold Tsanangudzo uye kupatsanurwa kwemajekiseni molds 5 matanho ekugadzira epurasitiki mold Ndezvipi zvikonzero zvinokanganisa kuumbwa kwezvigadzirwa zvepurasitiki? Kupesvedzera kwemhando yepurasitiki mold pakugadzirwa kwejekiseni rekugadzira Pamusoro pekugadzirisa kwepurasitiki mold uye kugadzirisa Ndeapi matambudziko makuru anogadziriswa mukugadzira nekugadzira molds epurasitiki? Zvikamu zvitanhatu zvemapurasitiki mold uye maitiro avo ekuumbwa Kune akati wandei nzira dzebudiriro dzekugadzirwa kwe mold mune ramangwana Ndeapi matanho matanhatu eCNC machining? Ndeapi magadzirirwo epurasitiki mold exhaust system? Inguva yakareba sei kuvandudzwa uye kugadzirwa kwepurasitiki molds ichatariswa? Ongororo yezvikonzero zvechigadzirwa chekubatanidza mutsara wemugadziri wejekiseni mold Ndedzipi nzira dzekuvandudza hupenyu hwehuku uye kukuya? Ndedzipi nzira dzakajairika dzekuumba epurasitiki? Ndedzipi dzakajairika nzira dzekupukuta dzemapurasitiki mold Musiyano uye kubatana pakati pekuumbwa uye lathe Iyo chaiyo ye mold ichave yakakwirira uye yakakwirira Maitiro ekusarudza chikamu chepakutanga chejekiseni mold tsika yekugadzirisa workpiece chinzvimbo? Ndezvipi zvimiro zvinoda kutariswa mukugadzirwa kwepurasitiki molds? Chii chinonzi tembiricha yekudzora molds epurasitiki? Ndedzipi ruzivo runofanira kutariswa kune dhizaini yekugadzira mota mold? Chii chinonzi injection mold processing? Ndeipi musimboti wejekiseni repurasitiki mold? Matanho epurasitiki mold design Iyo chaiyo pfungwa yehupenyu hwepurasitiki mold indasitiri yenyika yangu chaiyo yekuumbwa ine ramangwana rakajeka, uye inofambirana nemusika wepasirese Sei jekiseni rakaumbwa chigadzirwa riine dhizaini kona?Kukura kwayo kunoenderana nei? Matambudziko Anowanikwa Zviri Nyore muKugadziriswa kwePlastiki Molding Molds Plastic mold processing quality yekuvandudza nzira Chii chekuteerera mupurasitiki mold processing